ngbanwe xR Drive Alok's Dynamic 'Ndụ' Music Pụrụ Iche Dị Ndụ Na Brazil | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » Apụta » ngbanwe xR Drive Alok's Dynamic 'Alive' Music Special Live Streamed in Brazil
Nnukwu ihe nkiri DJ na Brazil na-egosi na 2020 mere na xR, dị ka DJ na mpaghara music Alok dọtara ndị 750,000 ya Ndụ 'ndụ' na Disemba, na-ekpuchikwa nde mmadụ asaa na YouTube. Ngosiputa xR na-edochi ihe ngosi xR mere ka egwu puru iche na ihe nkesa vx 4 na ihe ngosi rx abuo na-enyere ihe ngosi a aka itinye ihe di n’ime site n’eduba ihe n’enye ihe ndi ozo N’ezie, Unity and Notch
Alok bụ otu n’ime ihe oyiyi a ma ama na ebe a na-akụ egwu kọmputa na Brazil. Aha ya bụ Forbes Brasil dị ka otu n'ime ndị kachasị emetụta mmadụ n'okpuru 30 na mba ahụ. Site na nhichapụ nke ihe ngosi niile ọ na-egosi na afọ gara aga, ebumnuche nke xR ndụ iyi bụ iji weta ụzọ ọhụụ nke ịgbasa ọrụ onye na-ese ihe na nnukwu ụlọ egwu ya.
Onye isi oru ngo Fabio Soares si OkeStudio yana TheForce kpọrọ ụlọ ọrụ AV zuru oke nke Sao Paulo Maxi iji nye ọrụ nnabata xR maka ihe ngosi ahụ, ya na Tito Sabatini ọkachamara na-arụ ọrụ ngbanwe na nkwado teknụzụ. Ihe puru iche miri emi na Alok di omimi, na agbanwe agbanwe mgbe obula gosiputara oke ohia nke ero na osisi ndi ozo, uzo mmiri galactic, synapses, shards ice shards, obodo ndi na ewu ma gbasaa.
Nkwado site n'ọgbanwe "bụ ihe anyị na - enweghị ike ibi ma ọ bụrụ na anyị enweghị," Jose Augusto Martins, Executive Director na Maxi, na-akọ. “Site na nnukwu oru ngo di otua na ndi oru nlekota oru vidio ohuru iji otu esi eji xR, nkwado nke igbanwe bu isi. O nyere anyị obi ike iji na-agba ihe nke ọma. Anyị chọrọ ka ndị mmadụ nwee ume nke ezigbo ngosi ma mezuru ya.
"'Ndụ' bụ nnukwu ọrụ xR, anyị na-eme ya na nke mbụ ya na Brazil, n'ihi ya anyị mụtara ọtụtụ ihe n'oge usoro nke ime ka ọrụ ahụ bụrụ eziokwu," ka Jose na-agbakwụnye.
Maxi bụ naanị ụlọ ọrụ mgbazinye na ngwaọrụ iji wepụta mmepụta xR, ọ na-ekwu. Dika nkenke oru di nkpa choro ka eji ihe ato ato na-eme ka ihe ndi ozo na-adighi agha, Unity na Notch, tinyere otutu igwefoto na igwefoto anọ a na-enyocha site na iji usoro nyocha Estabili, ngbanwe bụ naanị ngwaọrụ nwere ike ịnye nkenke ahụ, Tito na-akọwa. “Ọ bụ ihe na-egosi amaghị arụ ma nwee ike ijikwa ọtụtụ mgbanwe igwefoto, koodu oge na-eso ihe ngosi DJ na ndị ọzọ.
Ndị otu Maxi nwere oge ngwụcha oge iji mụta pipeline maka injin atọ ahụ niile ma setịpụ nsuso maka igwefoto anọ, yana na-enyere onye ọ bụla metụtara aka ịghọta usoro ọrụ xR yana otu esi eme ka mmepụta mebere.
"Nke a bụ nnukwu mmepụta, na nraranye nke onye ọ bụla metụtara mere ka ọ mee," ka Tito na-ekwu. “Mgbe ihe nkiri ahụ gasịrị, onye njikwa na ndị ọrụ ụgbọ mmiri Alok nwere nnukwu mmetụta, nwee ahụ iru ala na obi ụtọ. Nzaghachi ndị mmadụ dịkwa ịtụnanya; ndị si n'ụlọ ọrụ na Brazil bịara ikele anyị, nke ahụ bụ ihe obi dị mma ịnụ na ụdị afọ ọjọọ dị otu a maka ụlọ ọrụ egwu. ”
Jose kwenyere na xR nwere ọdịnihu dị mma n'ahịa egwu egwu, na-eweta ndị na-eweta ihe ngosi na ndị na-ese ihe na gburugburu ebe ọ bụla enwere ike iche. “Echere m na nke a bụ teknụzụ na - eme onye ọ bụla na - ekwu,‘ Chaị!
Ebe e si nweta:
Onye Okike Ihe: Fabio Soares
Onye Mmepụta: Fernanda Padrão
echiche xR: OkeStudio na TheForce
xR Director Director: Dejumatos
xR Nduzi Nduzi: Tito Sabatini na Gabriel Weckmuller
Ihe ngosiputa teknụzụ na-eme ka ndị okike na teknụzụ nwee ike iche, mepụta ma nyefee ahụmịhe ọhụụ dị egwu na ọkwa kachasị elu.
Na ijikọta ezigbo oge ngosi nke 3D nke ngwanrọ dabere na ngwaike arụmọrụ dị elu, ngbanwe na-ebute ọrụ okike siri ike n'ọtụtụ na obi ike. Ntinye aka ohuru ohuru (xR) nke na - emeri ohuru na - enye ndi oru ohere iweta ihe omimi miri emi nke na - akpali ma tinye ndi mmadu n’ime ebe nile.
nwoghari xR enyeworị ike imepụta ezigbo oge mmemme maka ndị na-ese egwu dị ka Katy Perry na Billie Eilish, azụmaahịa azụmaahịa dịka SAP na Lenovo, ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ dịka Mahadum nke Michigan, mgbasa ozi TV dịka MTV Video Music Awards na America's Got Talent, azụmahịa ụdị dị ka Nike na Under Armor na ọtụtụ ahụmịhe ndị ọzọ mebere karịa mba 30.
Site na netiwu nke ndi otu uwa n’uwa na n’uwa ma na aru oru n’akuku ndi n’atu ihe nlere anya nke ndi uwa na ndi oru ihe omuma banyere ihe ndi di ndu, mgbasa ozi TV, ihe nkiri, nlegharị egwu egwu, ihe nkiri, nrụnye edozi na ihe omume ụlọ ọrụ na ihe omume ntụrụndụ, na-eme ka ọgbọ na-esote mmekọrịta. ngwaọrụ iji nyere ndị na-ese ihe na ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ aka ịghọta ọhụụ ha.
Previous: Neve® 8424 Console na-eweta Mgbakwunye Mgbakwunye nke Ọrụ Mike Smith
Osote: Ndị ọrụ na Igbe Na-eji Igwefoto Cinema Pocket 6K na ATEM Mini Pro maka MTV Movie & TV Awards: Onye Kasị Ukwuu Oge Niile